Iphrofayela Yenkampani - Changzhou Hollysen Technology Trading Co., Ltd.
Umkhiqizi we-compressor we-air conditioning we-Professional
Umkhiqizi opholisa umoya opholile
I-Changzhou Hollysen Technology Trading Co., Ltd.iyinkampani ephethwe yiChangzhou Kangpurui Automotive Air Conditioning Co., Ltd. Iyimboni yocwaningo nentuthuko yobungcweti, ukukhiqiza nokuthengisa izimoto ezisebenza ngama-air conditioning compressors kanye nezindawo zokupaka umoya. Imboni yethu itholakala eNiutang Industrial Park, esifundeni saseWujin, eDolobheni laseChangzhou, esifundazweni saseJiangsu, iphakathi nendawo yeYangtze River Delta, eseduze kweShanghai-Nanjing Expressway neYanjiang Expressway, enokuhamba okulula nezindawo ezinhle.
Njengamanje imboni inabasebenzi abangaphezu kwama-300, ngaphezu kwamalungu ethimba le-R & D angaphezu kwama-20, namalungu ethimba lebhizinisi lokuhweba langaphandle angaphezulu kwama-20. Umkhakha uzakhele ukuhlolwa kokusebenza komkhiqizo, ukuhlolwa kokuqina, ukuhlolwa komsindo, ukuhlolwa kokudlidliza, ukuhlolwa kwezimoto zangempela nokuhlolwa kwemishini namanye ama-laboratories ajwayelekile. Umqondo wokucwaninga nentuthuko wemboni "uhlangabezana nezidingo zamakhasimende, ukuqamba okungaphezu kokwakho" .Silungiselele futhi sathuthukisa imikhiqizo njalo kumakhasimende ethu. Imikhiqizo yethu eyinhloko uchungechunge lwe-vane-type yezimoto zokupholisa umoya ocindezelayo, kufaka phakathi i-KPR-30E (ubuchwepheshe obusha bamandla), i-KPR-43E (ubuchwepheshe obusha bamandla), i-KPR-43, i-KPR-63, i-KPR-83, i-KPR-96, i-KPR -110, KPR-120, KPR-140 compressors, kanye ne-piston compressor chungechunge, kufaka phakathi i-5H, 7H, 10S, ama-compressors wokufuduka okuguquguqukayo kanye ne-Car yokupaka i-Air conditioner.
Ngokuthuthuka kweminyaka engu-15, inkampani yethu ibinamandla amakhulu wobuchwepheshe nokuklama okuqinile nekhono le-R & D. Le mboni inohlelo oluphelele lokulawulwa kokuphathwa kobuhlakani futhi isidlulisile isitifiketi sohlelo lokuphathwa kwekhwalithi yezimboni zamazwe omhlaba jikelele se-IATF1 6949. Imboni ithole ngokulandelana ngaphezu kwama-40 okusungula, okusebenzayo kanye nokubukeka kwamalungelo obunikazi, iwine isihloko seNational High-tech Enterprises.
Imikhiqizo yale mboni ithunyelwe eYurophu, eNingizimu Melika, eNyakatho Melika, eMpumalanga Ephakathi nase-Asia, futhi umkhiqizo wale mboni uzuze idumela eliphezulu emakethe yamazwe omhlaba. Noma ngabe manje noma esikhathini esizayo, inkampani izohlinzeka ngenhliziyo yonke amakhasimende ethu ngemikhiqizo esezingeni eliphakeme, ubuchwepheshe bemikhiqizo yobungcweti kanye nensizakalo esezingeni eliphezulu yokuthengisa ngemuva, ayeke ukuhlola nokuthuthuka, futhi ithuthuke ngasikhathi sinye nezinkampani ezifuywayo nezamazwe angaphandle eChina .
Ngakho-ke sicela ukhululeke ukuxhumana nathi ukuthola imibuzo.
Futhi uyakwazi ukuza ebhizinisini lethu wedwa ukuze wazi ngokwengeziwe ngathi. Futhi ngokuqinisekile sizokunikeza ikhotheshini enhle kakhulu nesevisi yangemva kokuthengisa.